Gaas Oo u Hanjabay Golahahiisa Wasiirada! - iftineducation.com
Gaas Oo u Hanjabay Golahahiisa Wasiirada!
aadan21 / February 8, 2016
iftineducation.com – Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas ayaa digniino kasoo saaray Musuq-maasuqa ay wasaaradaha qaar ku hayaan qorista shaqaalaha ay qaadanayaan.
C/wali Gaas ayaa sheegay inuu la socdo qaababka ay ku shaqeynayaan Wasiirada qaar, waxa uuna tilmaamay in xaaran ay tahay in la kala sooco shacabka deegaanka ee shaqa doonka ah.
Madaxweyne Gaas ayaa digniintaasi jeediyay xili uu kulan la qaadanaayay Golaha wasiirada maamulka waxa uuna arrin lama aqbalaan ah ku sheegay in shaqaalaha uu mishaarkooda bixin doono Bank-ga adduunku la kala qaato iyadoo ay jiraan in qaarkood la ciilo iyaga oo leh aqoon iyo howl-karnimo.
Mar uu arrinkaasi ka hadlaayay ayuu yiri “Ma yeelayno in la musuq-maasuqo qorista shaqaalaha maamulka, waxayna ka mid tahay ballan qaadkii maamulka ee ahaa hufnaan iyo caddaalad qaran“.
Gaas waxa uu tilmaamay inuu la xisaabtami doono wasiirkii ka dhaga adeega baaqa iyo digniinta uu jeedinaayo, waxa uuna suuragal ka dhigay in haddii uu arrinku adkaado ay u xilsaari doonaan gudi baaritaan ku sameeya qaabka loo xulaayo shaqaalaha cusub.
Hadalka C/wali Gaas waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaan maamulka Puntland uu soo bandhigay 60 shaqo oo bannaan oo ka mid ah shaqooyinka World bank uu Puntland ka fulinayo.
DEG DEG:Magaalada Marka oo Al-Shabaab laga saaray
Arrag Sawirka: Musuqa ka taagan Somalia oo saameyn ku yeeshay meel aan laga fileynin